आज पत्रकार रबि लामिछानेको जन्म दिन, कति बर्ष लागे रबि ? (हेर्नुहोस्) – नेपाली सूर्य
September 14, 2019 Nepali SuryaLeaveaComment on आज पत्रकार रबि लामिछानेको जन्म दिन, कति बर्ष लागे रबि ? (हेर्नुहोस्)
उनि जनताका एक प्रिय पात्र हुन् जसले देश र जनताप्रति संधै उच्च सम्मान गर्ने गर्दछन |
शनिवार पात्रो अनुसार हप्ताको सातौं दिन पर्छ । यसको नामाकरण शनिग्रहको रूप मानिने शनि देवताको नामबाट गरिएको हो । हिन्दु धर्मको किवदंती अनुसार शनिबारकी माता कालीमाता हुन् । अझ शनिदेवलाई न्यायको देवता मानिन्छ । धर्मशास्त्र अनुसार, यदि कुनै व्यक्तिको कुण्डलीमा शनिदोष छ भने त्यस्ता व्यक्तिले शनिबारको दिन भोजन गर्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ । के छ त शनिवारको विशेषता ?
– रातो खुर्सानी पनि शनिदेवलाई मन पर्दैन त्यसैले शनिवारको दिन रातो खुर्सानी प्रयोग नगर्नुहोस् ।, – शनिवारको मुसुरोको दाल खानबाट पनि बच्नुहोस् ।, – शनिवारको दिन आँपको अचार खाने त के सम्झदा पनि नसम्झनुहोस् । किनकी आँपको सेवन शनिदेवलाई मन पर्दैन ।
धनगढीमा आकर्षक उपहार भन्दै ठगी गर्ने छ भारतीय नागरिक पक्राउ
करिश्माले शेयर गरिन् राजेश सँगकाे पुरानो फाेटाे
नेहा शर्माले जीतीन ‘खत्रों के खेलाडी मेड इन इण्डियाको टर्फी
August 30, 2020 August 30, 2020 Nepali Surya